NR-F610GT-X Refrigerator - Panasonic
ခန့်ငြား၍ ကျယ်ပြန့်သောဖန်သားအပြည့် ပုံစံနှင့် တံခါးခြောက်ခုပါသော ရေခဲသေတ္တာ
ခေတ်မီဆန်းသစ်၍ ကျယ်ပြန့်သော ဖန်သားဒီဇိုင်း
နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်း နောက်ခံတွင် အရောင်ထည့်ထားသော လှပပြီး ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည့် မှန်ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ခိုင်ခံ့မှုရှိပြီး ပွန်းရာစင်းရာ ခံနိုင်သော၊ အချိုးအဆကျနအောင်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖန်သားပြင်ကြောင့် ကြည့်ကောင်းလှပါသည်။ သန့်ရှင်းရန်လည်း အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် ရေခဲသေတ္တာကို နှစ်သက်စွာ အသုံးပြုလိုက်ပါ။ တံခါးများစွာပါဝင်၍ သေသပ်ပြီး ကျယ်ပြန်လှပသော ရေခဲသေတ္တာဖြင့် သင်၏ လူနေမှုဘဝပုံစံကို အမြင့်ဆုံး ထင်ဟပ်ပြသနေပါသည်။
Premium တံခါးများစွာပါသည့် သိုလှောင်ခန်း
1. ရေခဲသေတ္တာအကန့် (ခန့်မှန်းခြေ ˚C)
2. ခန့်မှန်းခြေ -၃°C ဖြင့် လတ်ဆတ်မှုပေး အအေးပေးစနစ်/ အအေးပေးထားသော ရွေးချယ် အကန့် (ခန့်မှန်းခြေ -၃~၂˚C)
3. ရေခဲ အကန့် (ခန့်မှန်းခြေ -၂၀~၁၈˚C)
4. လတ်ဆတ်မှုပေး အအေးခန်းအကန့် (ခန့်မှန်းခြေ ၁၉~-၁၇˚C)
5. ရေခဲစက် အကန့် (ခန့်မှန်းခြေ.-၂၀~-၁၈˚C)
6. ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်ရန် အကန့် (ခန့်မှန်းခြေ ၃~၈˚˚C)
အကောင်းဆုံးသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်အတွက် ခန့်မှန်းခြေ -၃°C ထိ
*ဝယ်ယူသည့် အချိန်တွင် ရေခဲသေတ္တာသည် Chilled အနေအထားတွင် ရှိနေပါမည်။ Prime Fresh ကို အသုံးပြုရန်၊ Setting ကို ပြောင်းပါ။
ပို၍ လတ်ဆတ်နေစေရန် အလူမီနီယံ ပလိတ်ပြား
ခန့်မှန်းခြေ. -3°C အထိ လျှင်မြန်စွာအေးစေရန် အလူမီနီယံ ပလိတ်ပြားကို ထည့်ပြီးနောက်တွင် ယင်းက အရာဝတ္ထုများမှ အပူကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပေးပါသည်။ အပေါ်ဘက်မှလေအေးနှင့် အောက်ခြေမှ ပလိတ်ပြားတို့သည် အစားအစာများကို သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်စွာ သိုလှောင်ထားနိုင်ရန် နှစ်ဆ အအေးပေးခြင်း စွမ်းအင်တစ်ခု ပါရှိသည်။
၁၀၀% ဖွင့်နိုင်သော အံဆွဲများ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အကန့်နှင့် အေးခဲသည့် အကန့်တို့၏ အံဆွဲများကို အပြည့်အဝဖွင့်နိုင်သောကြောင့် သင်သည် အထဲမှ အရာအားလုံးကို တစ်ချက်ကြည့်ရုံဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဝန်အများအပြားကို ခံနိုင်သည့် လက်ကိုင်တန်းစနစ်သည် ပစ္စည်းများပြားစွာ သိုလှောင်ထားသည့်အခါတွင်ပင် လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာဖြင့် ဖွင့်နိုင်သည်။ ထိုသိုပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ထူးကဲစွာ ကြာရှည်ခံပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ နှင့်ညီမျှသည့် ကာလတစ်ခုကြာသည်အထိ အဖွင့်/အပိတ် လုပ်သည့်တိုင် အံဆွဲသည် လေးလံသွားမည် မဟုတ်ပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အကန့်နှင့် အေးခဲသည့် အကန့်တို့သည် ကြီးမားသည့် ပစ္စည်းအများအပြားကို သိုလှောင်နိုင်စေပါသည်။
ထို့ပြင် ထောင့်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ပုံသွင်းထားပါသည်။ ဝယ်ယူပြီး အဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲကြည့်လိုက်ပါ။
အနံ့အသက်များ မရောစေသည့် ရေခဲစက်အကန့်
သီးခြားအကန့်များပါရှိသည့်အတွက် အနံ့အသက်များရောနှောခြင်းကို ကာကွယ်ကူညီရန် ပစ္စည်းများကို သီးခြားစီ သိုလှောင်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဘက် အကန့်သည် ကြက်ဆင်တစ်ကောင်လုံးကဲ့သို့ ကြီးမားသည့်အရာများကို သိုလှောင်ခြင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ပုလင်းကဲ့သို့ရှည်သောပစ္စည်းများကိုပင် ထောင်၍သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် သေးငယ်သော၊ အနံ့မပြင်းသော အရာများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အစားအစာများ ပုတ်သိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ပိုမို၍ ပိုးမွှားသန့်စင်စွာ သိုလှောင်ထားနိုင်ရန် အနံ့အသက်ရောနှောခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အထူးအမြန်အေးခဲခြင်းအတွက် လတ်ဆတ်မှုပေး အအေးခံစနစ်
အလွန်အေးသော ခန့်မှန်းခြေ -၃၂°C လေကို တဟုန်ထိုး ထုတ်ပေးမှုကြောင့် ပစ္စည်းများကို လျင်မြန်စွာအေးခဲစေပါသည်။ ပူနေသည့်အစားအစာကို ထည့်သည့်တိုင် လတ်ဆတ်စွာ ချက်ပြုတ်ထားသည့် အစားအစာများသည် ဘေးမှ အစားအစာများအပေါ် မည်သည့် သက်ရောက်မှုမျှ မရှိစေပါ။ အစားအစာများကို အေးသွားရန် စောင့်စားရခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး ထည့်နိုင်သည်။ အမြန်အအေးပေးသည့် စနစ်ကို ကျေးဇူးတင်ရပါမည်။ အစားအစာများထဲရှိ ဆဲလ်များသည် ပျက်စီးမှုမရှိသောကြောင့် အနံ့၊ အရသာများနှင့် အာဟာရဓာတ်များကိုလည်း မခြွင်းမချန် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အရည်ပျော်စေသောအခါ ကွဲပြားခြားနားချက်သည် ထင်ရှားလာပါသည်။ အရည်များ တစက်စက်ကျခြင်းနှင့် အရောင်ပြောင်းခြင်းတို့သည်လည်း ဖြစ်ခဲပါသည်။
ဤကြီးမားကောင်းမွန်သော အကန့်တွင် ပိုမိုအဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် တံခါးအကန့်များစွာ ပါရှိပါသည်။ သင့်ရေခဲသေတ္တာကို သပ်ရပ်ပြီး စုစုစည်းစည်းဖြစ်အောင် အလွယ်တကူ ထားရှိနိုင်သည်။
ရေခဲဗန်းထဲကိုရေဖြည့်ပြီး ၈၀ မိနစ်ပင် မကြာသော အချိန်အတွင်း ရေကိုခဲစေပီး အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် သိုလှောင်ပေးပါသည်။ မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများ အလည်လာသည့် ပူပြင်းသော နေ့ရက်များအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါသည်။ ရေခဲဗန်းကို လွယ်ကူစွာဆေးကြောနိုင်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ညီညွတ်စေပါသည်။
* အကန့်တစ်ခုစီမှ ဝန်းကျင်အပူချိန် ၂၀ °C ကို “၂” သို့သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တံခါးများကို ဖွင့်မထား သို့မဟုတ် ပိတ်မထားပါ။
အားကောင်းသော ပိုးမွှားသန့်စင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများပါသော ငွေရည်အုပ် ရေစစ်ကို တပ်ဆင်ထားကာ အပြာရောင် LED မီးက ရေစစ်၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ထိုနည်းပညာများသည် လေမှပေါက်ဖွားသော ပိုးမွှားများအား အသက်ရှင်သန်နိုင်မှုနှုန်း ၀.၀၀၀၁% သို့ ရောက်ရှိအောင် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။*
SLG (Suedsachsen Wasser GmbH) မှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးထားသည်၊ ပြင်ပ ဂျာမန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တီထွင်သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား ၂၃ ခုကို အသုံးပြုပါသည်။ (ex. လျှောက်ထားမှုနံပါတ် ၂၀၀၇-၁၁၈၆၉၂)
1.၁။ သိုလှောင်မှု Sensor
2.၂။ အလင်း Sensor
3.၃။ အခန်း အပူချိန် sensor
4.၄။ တံခါး Sensor
5.၅။ အတွင်းပိုင်း အပူချိန် Sensor
အလင်းနှင့် သိုလှောင်မှု အာရုံခံစနစ်များကို အသုံးပြုပြီး ရေခဲသေတ္တာသည် ရေခဲသေတ္တာအကန့်ထဲတွင် သိုလှောင်ထားသည့် အစားအစာပမာဏအပြောင်းအလဲများကို အာရုံခံပြီး အအေးစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သည်။
ယခင်ကဆိုလျှင်၊ အစားအစာပမာဏ အနည်းငယ်ထပ်ထည့်လျှင်ပင် ECONAVI ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ပါသည်။ Storage Eco အသစ်နှင့်အတူ ECONAVI သည် ထပ်ထည့်သည့် အစားအစာပမာဏ နည်းသည့်အခါ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ယင်းက စွမ်းအင်ကို အလွန်ချွေတာစေပါသည်။
ကွန်ပျူတာငယ်က အတွင်းပိုင်းမှ အပူချိန်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ စူးစမ်းရှာဖွေပါသည်။
တံခါးအဖွင့်/အပိတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ထားသည့် အစားအစာပမာဏအရ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအတွက် တိကျသော အချက်အလက်များကို Compressorဆီသို့ ပေးပို့ပေးသည်။
Compressorသည် အခြေအနေနှင့် သင့်လျော်ကိုက်ညီအောင် လှည့်သည့် အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိပါသည်။
ရေခဲသေတ္တာအတွင်းတွင် အပူချိန်မပြောင်းလဲအောင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပိုမို ထိရောက်မှုရှိသော၊ အားကောင်းသော အအေးဓာတ်ကို ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
632 L (IEC_62552-2007)